Thursday August 07, 2008 - 20:10:17 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Qeybta 2aad Wiilkaas waan wadda caayn jirnay, farahaan ku taagtaagi jirnay, markuu dareemo in aan asiga la hadleeynane wuu na raacdeysan jiray, kadibna inta isku qabano ayuu qofkasta meeshuu ku soo gaaro ku dhufan jiray. Asigoo ooynaa ayaana ka s
Waxuu ahaa faceen, kama qurux iyo qaayo weeyneen balsa in uusan wax maqlin ayaa dugsiga loogu diiday, iyo waliba in ardayda dugsiga iyo macalinkaba aysan aqbali karin qof aan wax maqlin inuu ka mid noqdo.
Markaan arko sida soomaalida ay u quursadaan dadka lixda lixaad la'a waxaan dareemaa in ay yihiin dad cunsuriyeen ah, gumeysi iyo kala soocii ayaga lagu heeyn jiray/laguna haayo weli ku haayo bulshadooda qayb ka mid ah.
Waxaansa la sii yaabay sababta ay u nacaayaan in reer Galbeedka ilmahooda iskuulaadka ku cunaqabateeyaan, itixaamaadka ku ridaan, si xun ula dhaqmaan, ardayda, macalin iyo bulshadane ay raali ka wada yihiin dhaqankaas cunsurinimada ka muuqato maxaayeelay Midibkooda iyo diintooda ayaan la aqbali karin soomaalida/ajnbiga?
Maxeey iskaga dhigaayaan soomaalida dad leh damiir gubta iyo diin markay ayaga bulshada soomaaliyeed kala sareenteeda ka dhigeen mid ay ayaga qabiil ku calamadeeyeen iyo mid ay sida Illaah ku abuuray ku inkireen, kuna liidaayaan?
Waxaa horay loo yiri:" Wax adna jecleen in naftaada lagu sameeyo ha ku sameeynin nafta walaalkaa?" Waxaana ku leeyahay anigane:" Ogaaw in aad adiga ilbiriqsi ku noqon kartid qofka aad liideysid ama u aragtid inuusan aheeyn biliaadan!" Ileen sida aan dareen iyo maskax shaqeeynee u leedahay oo kali ayeey u leeyihiin,
waalid hadaad tahay waa waalid, hadaad tahay caruur waa caruur, hadad tahay walaal waa walaal. Soomaalida inbadan ayeey caysaa nidaamka ka jiro dalka Sucuudi Carabiya, oo ah in boqortooyada dalkaas Mareykan gumeysto, boqortooyadane ragga dalkeeda si qaas ah u gumeysato, ragguna dumarka si qaas ah u gumeystaan, dumarkuna shaqaalaha/adeegtada ajnabiga ah ee guryahooda jooga gumeystaan, shaqaalahane gumeeystaan caruurta yar oo loo keenay in ay xanaaneeyaan, ayagoo weliba ku gumeysanaa xoolahii waalidkooda iyo gurigooda dhexdiisa.
Balsa ma la is weeydiiyay waxa soomaali nidaamkaas ku caayneyso gumeysiga weynaaday oo aan magac iyo maasuus midna lagu heleynina oo dalkooda ka jirina ay u baneeynaayaan, oo weliba aysan jirin qof wax ka sheegi karto?
Waa wax laga yaxyaxo, mudanna in dib loo fiirsho, oo aqliga la adeegsado. In aad caaysid ama quursatid qof adigoo kala ah sagaal bilood calool ku jiray, xaawo iyo Aadam ka soo askumay waa ugu danbi iyo damiir la'aan xadkeeda dhaaftay.
Ma is weeydiisay waxa aad sameeyn laheeyd ADIGA hadii dhaqtarka la socdo caafimaadka ilmahaaga caloosha hooyo ku jiro kuu sheegi lahaa in cunugaaga yahay cunuga ay ka maqan yihiin hidasidayaal kuwa ka mid ah, kuna soo bixi doono cunug aan aheeyn ilmaha loo yaqaano "Normalka"?
Ma ka fekertay aqriste? Maxaad sameeyn laheeyd hadii xaaskaaga/ninkaaga baabuur la gadoomi lahaa am dardari lahaa kadibna maskaxda dhaawac ka gaaro, oo kaadida iyo saxarada qof laga qaadaa uu noqdo?
Ma is weydiisay sida ay niyadaada ahaan laheeyd hadi aad tahay qof aan la mid aheeyn dad kale oo aaminsan inuusan awoodin waxa ay awoodaan oo kale?
Ma is weeydiisay SOOMAALIYAHOOW hadii aad tahay qof la wada fiirinaa, oo si gooni ah loogu turaa, maxaayeelay "naafo" ayaa tahay?
Ma is weeydiisay hadii ardayda aad iskuulka wada joogtaan boondada aad keentid ay ku wada qoslaayaan oo aad adiga ardayda u hooseysid? Ma is weeydiisay AQRISTE?
Aqristaha qaaliga ahaaw la soco qaybta danbe oo aan ku qaadan doono dadka aan wax arkin/indhoolka ah dhibaatooyinka u goonida ah iyo sida bulshada soomaaliyeed ula dhaqmaan qaybtaas bulshadeena ka mid ah.
NB: Qoraalkaan xaquuqdiisa waxaa leh qoraaga ku saxiixan amar la,aana lama daabacan karo, mana la qaadan karo, sidoo kale mala'awaal waa ka mamnuuc ilaa ogolaasho laga helo qoraaga sheekada iska leh. kala xariir: samsam_1989@hotmail.com
Dhageyso:- Agaasime Xayir"Afar Mas'uul Ayaan Eheen , Ninkii Qolka Noogu Soo Galay Yusuf Bari Bari Kaliya ayuu Xabadaha Ku Dhuftay
29/03/2015 - 12:25:38
09/03/2015 - 22:19:19
(Dhageyso) Fowziya Yusuf Xaaji Aadan oo kajawaab Celisay Eedeen Culus
29/03/2014 - 20:59:34
ILMADII DAGAALKA SOKEEYE "A. M. Yusuf (Wayeel)"
10/02/2014 - 13:04:40
H.E. Fawzia Yusuf H. Adam oo sheegtay in muwaadiniin Soomaali ah ay ku geeriyoodeen dagaalada ka soconaya South Sudan.
25/12/2013 - 17:28:27
H.E. Fawzia Yusuf H. Adam iyo wafdi ay hogaamineyso oo dalka dib ugu soo laabtay kadib ka qeybgalkooda shirka wadamada Africa iyo France .
09/12/2013 - 20:54:02
H.E. Fawzia Yusuf " qorshaha kuma jiro dib u celin qasab ah oo lagu sameeynayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya".
12/11/2013 - 20:25:39
Talo aan la ii dirsan (Warbixin Talo ah) By: Yusuf Garaad
05/07/2013 - 16:31:10
27/03/2013 - 01:37:04